यसरी जोगिऔं दसैंमा संक्रमणबाट:: Naya Nepal
काठमाडौँ — विज्ञहरूले दसैंमा अत्यधिक आवतजावत हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाबाट कोभिड–१९ संक्रमण देशभरि फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बस र साना गाडीमा कोचिएर यात्रा गर्ने भएकाले भाइरसको विस्तार धेरै हुने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका हुन् । त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर दसैंमा यात्रा गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । ‘दसैं–तिहार मान्न काठमाडौं छोड्नेहरूको संख्या बढ्दो छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘यसरी उपत्यका बाहिरका गाउँ र सहरमा कोभिड भाइरस पुग्छ ।’ हटस्पटको रूपमा देखिएका उपत्यकाबाट घर जानेहरूबाटै संक्रमण नदेखिएका नयाँ ठाउँमा द्रुत गतिले संक्रमण सर्ने देखिन्छ । उनले खासगरी रात्रिबसमा झ्यालढोका बन्द हुने भएकाले हावा ओहोरदोहोर नहुँदा संक्रमणको विस्तार सजिलै हुने बताए । अझ रात्रिबसमा सुत्दा मास्क नलगाए र एसी बस भए झन् बढी संक्रमणको सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।माइक्रो बसलगायत साना गाडीहरूमा समूहमा टाढा–टाढाको यात्रा गर्नु संक्रमणको दृष्टिकोणले झन् जोखिमपूर्ण भएको डा. दासले बताए । ‘एक जनाले रात्रिबसमा भएका ९० प्रतिशतसम्म व्यक्तिमा कोभिड सार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो भाइरस १५ मिनेटभन्दा बढीको निकट सम्पर्कमा रहँदा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसमा पनि झ्यालढोका थुनिएको बसमा त घण्टौं बस्नुपर्ने भएकाले एक जना संक्रमित नै भाइरस सार्न काफी छ ।’
दसैं मनाउन घर जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा स्वाभाविक जनसंख्या घट्ने भएकाले संक्रमणको विस्तारमा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना भए पनि पुनः तिहारपछि संक्रमणको दोस्रो लहर आउने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । हाल उपत्यका र प्रदेश १ बाहेक अरू प्रदेशमा कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा देखिएको छैन । दसैं–तिहारपछि उपत्यका फर्किनेहरूको लर्को लाग्ने समय राजधानीमा जाडो सुरु भइसक्छ । हाल युरोपेली मुलुकमा जाडो सुरु हुनासाथ कोभिड संक्रमणको नयाँ उचाइ (पिक) देखिएको छ । ‘तिहारपछि देखिने कोभिड संक्रमणको ‘पिक’ जाडोसम्म जान्छ,’ डा. दासले भने ।शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले दसैं–तिहारपछि कोभिडको अर्को तरंग उपत्यकामा आउन सक्ने जनाउँदै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । ‘जाडोमा भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ, यसैले सबैलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं सुरक्षित रहेर दसैं मनाउन भनेका छौं तर उपत्यका छोड्नेहरू दिनहुँ बढ्दै छन्,’ उनले भने । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले यस पटक सकेसम्म दसैं–तिहारमा यात्रा नगर्न आग्रह गरे । ‘यस पटकको दसैं भौतिक रूपमा भन्दा पनि भावनात्मक रूपमा मनाऔं, सम्झौता गरौं, स्थिति जटिल छ । पोहोरजस्तै सबै कुरा नखोजौं । जहाँ छौं त्यहीं दसैं मनाऔं,’ उनले भने ।जाडोमा उपत्यकामा झ्यालढोका थुनेर एउटै कोठामा बस्नेसुत्ने आदि गर्दा संक्रमणको विस्तारमा झन् सघाउने विज्ञहरूले बताएका छन् । चाडपर्वमा धेरै व्यक्ति एउटै कोठामा कोचिएर घण्टौंसम्म तास खेल्ने, धूमपान र मदिरा सेवनले संक्रमण बढ्ने डा. दासले बताए । ‘दसैं–तिहार सुरक्षासाथ मनाउनुस्, मन्दिर नजाँदा नै जोगिइन्छ, समूहमा गर्ने काम नगरौं,’ उनले भने । उनले टीका थाप्ने क्रममा हुने निकट सम्पर्क र अधिकतम बसाइले संक्रमणको जोखिम झन् बढाउने र टीका थाप्ने क्रममा बूढापाका, दीर्घ रोगीहरूमा संक्रमणको बढी जोखिम देखिने जनाए ।बूढापाकाबाट टीका थाप्न सकेसम्म भर्चुअल माध्यम उपयोग गर्ने वा विकल्प नभए दुवै जनाले मास्क लगाएर हात सेनिटाइज गरेर टीका थापेर तुरुन्त निस्किनुपर्ने डा. बाँस्तोलाको सुझाव छ । ‘जति बढी समय भेटघाट, सम्पर्क त्यति बढी संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले टीका थाप्नै परे खुला ठाउँमा तुरुन्त लगाएर हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने । दसैं–तिहार मनाउन उपत्यका बाहिर जानेहरूलाई स्थानीय निकायले दुई सातासम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र समाजमा घुलमिल गर्न दिने नियम कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा उपत्यकाको संक्रमणको तरंग मुलुकको अन्य भागमा सल्कन कम हुनेछ ।दुई साता क्वारेन्टाइन बस्न नचाहनेहरूले एक साता क्वारेन्टाइनमा बसेपछि पीसीआर गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए मात्र समाजमा घुलमिल गर्न दिनुपर्ने डा.दास बताउँछन् । राजधानीबाहिर जानेहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनसम्बन्धी बाध्यताले अनावश्यक यात्रामा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । चाडपर्वको समय र चिसोमा संक्रमण बढ्ने खतरा भएकाले आगामी ३ देखि ४ महिना नेपालीहरूले थप स्वास्थ्य सजगता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
‘ग्राहकले सेफ्टी भनेकै टाटा मोटर्सका गाडी सम्झन्छन्’
काठमाण्डौ – कोरोना भाइरसकाे महामारीका कारण अहिले देशका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । लामो समयकाे लकडाउनले उद्योग, व्यापार र व्यवसाय बन्द भएका कारण व्यवसायीले आम्दानी गुमाएका छन् भने कामदारले रोजगारी ।अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि लकडाउनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायी तथा कामदारहरु प्रभावित बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यवसायमा परेको असर र सिप्रदीको टाटा मोटर्सका प्यासेन्जर भेइकल्सको बिक्री वितरण र चाडपर्व लक्षित अफरबारे उज्यालो सहकर्मी मल्लिका थापाले सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडका वरिष्ठ उपप्रबन्धक प्रसन्न पन्तसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिप्रदीको टाटा मोटर्सका प्यासेन्जर भेइकल्सको बजार कस्तो छ ?
कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी बनेको समयमा अटोमोबाइल्स व्यवसाय मात्र नभएर सबै क्षेत्रलाई यसले असर गरेको छ । कोरोनाका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा हुँदा गाडी बिक्री ठप्प नै भयो । तर खुलेको बेलामा बजार बिस्तारै माथि उठ्दै छ । चाडपर्वकाे सिजन भएकाले पनि अहिले बिक्री बढेको छ । पहिलेदेखि नै यो समयमा बढी खरिद बिक्री हुने गरेको थियो । अटो बजारले बिस्तारै गति लिँदैछ । ब्राण्डहरु स्किमसहित आएका छन्, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
टाटाको कुन गाडीको बिक्री बढी छ ?
ग्राहकले सन् २०१८ मा लन्च भएको टाटाको हिरो प्रोडक्ट नेक्सन बढी रुचाउँछन् । यसले जहिले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको हुन्छ । सफल तरिकाले बिक्री भइरहेको छ । टियागो र टिगोरले पनि ग्राहकमाझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइरहेका छन् । त्यसैगरी अल्ट्रोज पनि पपुलर भइरहेको छ । मार्केटमा यसको चार्म छ । टाटाको सानो गाडीमा त सधैँ नै चार्म छ । यस्तै एच फाइभले पनि आफ्नो उचाइ कायम राखेको छ ।
टाटाको गाडीमा भएका कस्ता फिचरले ग्राहक आकर्षित भएका छन् ?
अहिले ग्राहकले गाडी किन्दा फिचर र लुक्स मात्र नहेरेर सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएका हुन्छन् । सुरक्षा भन्नेबित्तिकै ग्राहकको पहिलो रोजाइ नै टाटा भएको पाइन्छ । टियागो र टिगोर ग्लोबल एन क्यापबाट फोर स्टार रेटिङ प्राप्त गाडी हो , नेक्सन फाइभ स्टार एसयूभी, अल्ट्रोज ह्याज सेग्मेन्टमा एकमात्र इण्डियन म्यानुफ्याक्चरिङमा फाइभ स्टार रेटिङ गाडी हो । टाटाको चार्म सेफ्टीमा छ र मार्केटमा ग्राहकले आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षालाई खोज्ने भएकाले हाम्रो गाडीमा थप आकर्षण बढेको हो ।
यसअघि दशैँ तिहारको समयमा अटो बजारमा पनि निकै चहलपहल हुन्थ्यो, यसपालि काेराेनाकालकाे अवस्थामा त्यति रौनक छाएको देखिँदैन, याे अवस्थामा कम्पनीले कस्ता अफर ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्ने योजना ल्याएको छ ?
चाडपर्वका बेला जहिले चार्म हुन्छ किनभने गाडी व्यवसायीले यतिबेला राम्रो अफरहरु अघि सार्छन् । कोरोनाको कारण यसपालिको बजारमा असर परेको छ । तर पनि मार्केटमा गाडीको केही डिमाण्ड नै छ । त्यसैले हामी जस्तो डिस्ट्रिब्युटर्सले मार्केटमा केही नयाँ गरौँ, वातावरणमा चहलपहल ल्याउने भनेर अफरहरु ल्याएका हुन्छौँ । यसपालि टाटा प्यासेन्जर गाडीहरुको खरिदमा चार लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट, निःशुल्क एक वर्षको सवारी कर, प्रत्येक गाडीको मूल्याङ्कनमा सरप्राइज गिफ्ट र प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक उपहारको व्यवस्था छ । यस्तै जुनसुकै गाडीको एक्सचेन्जमा पचास हजार रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । हामीले जे गर्न सक्छौँ, त्यहीअनुसारको अफर दिन्छौँ भनेका छौँ । जुन गाडीमा जति नगद छुट दिन सक्छौँ त्यति मात्र अफर गरेका छौँ, त्योभन्दा बढी दिन्छौँ भनेर ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेका छैनौँ, त्यसैले ग्राहकले पनि हाम्रो विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ ।दशैँको अवसरमा ग्राहकले टाटा मोटर्सको जुनसुकै शो रुममा गएर नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादन टाटा एच फाइभ, नेक्सन, टियागो, टिगोर र अल्ट्रोजलगायतका गाडीहरु अवलोकन, टेस्ट ड्राइभ तथा खरिद गर्न सक्ने छन् । अहिले दशैँलाई टार्गेट गरेका छौँ । तिहार, छठलगायतका पर्वमा पनि हामी केही नयाँ गर्छौँ कि त यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ, अझ थप आकर्षक उपहार तथा छुटको योजना ल्याउनेछौँ ।
टाटाको गाडीका लागि अनलाइन बुकिङ र बिक्री वितरण कस्तो छ ?
कोरोना महामारीको यो समयमा टाटा मोटर्सले नेपालमा पहिलो पटक यो क्षेत्रमा वेब पोर्टलको सुरुवात गरेको हो । यो पोर्टलमार्फत ग्राहकले अनलाइन बुकिङ, क्याटलगसहितको सवारीका विवरण, सवारीको डेमो भिडियो, टेस्ट ड्राइभ बुकिङ, पुरानो सवारीको तत्काल मूल्याङ्कन, ऋण मूल्याङ्कन, सर्भिस बुकिङलगायतका सुविधा घरमै बसेर लिइरहेका छन् । गाडीको बुकिङ र बिक्री वितरण राम्रै भइरहको छ । इन्क्वायरी पनि छ, हामी फलोअप गरेर उहाँहरुको घरमै गाडी पुर्‍याएर, टेस्ट ड्राइभलगायतको सुविधा पनि दिइरहेका छौँ ।
टाटाको बिक्रीपछिकाे सेवा (After Sales Service) राम्रो छ भनेर यसअघि नै चर्चामा छ, अहिले केही विशेष सुविधा थपिएका छन् कि ?
गाडी बेच्नु मात्र नभएर बिक्रीपछिको सेवालाई ध्यानमा राखेर सिप्रदी अघि बढिरहेको छ । सिप्रदीले कम्पनीको सुरुवातबाटै बिक्रीपछिकाे सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो सेवालाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ ।
बजारमा विभिन्न ब्राण्डका गाडी छन्, स्किम पनि त्यहीअनुसारका छन् तर टाटाकै गाडी किन रोज्ने त ?
ग्लोबल एनक्यापकको रिपोर्ट हेर्ने हो भने टाटाका गाडीहरुले सुरक्षामा उच्च रेटिङ पाएका छन् । दुई वटा गाडीले त फाइभ स्टार नै पाएका छन् । टाटाका गाडी फोर स्टारभन्दा कम रेटिङका छैनन् । त्यसैले हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौ कि प्रतिस्पर्धीमध्ये सेफ्टीमा हामी अगाडि छौँ । योसँगै कन्भिनियन्ट, इन्टेरियर, साउण्ड क्वालिटी, ड्यास बोर्डमा राखेका कुरा, फिट र फिनिसिङ सबै कुरा उत्कृष्ट छ । हामीले क्वालिटी प्रोडक्ट बेचिरहेका छौँ ।
गाडी किन्दा अफर र छुट हेरेर किन्दा हुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा ग्राहकहरुलाई पनि आर्थिक रुपमा समस्या नै छ । त्यसले गर्दा पनि मान्छेले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार गाडी छान्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अफर र छुटले पनि केही सहयोग गर्छ । तर भ्याल्युलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । भ्याल्यु भनेको सुरक्षा हो । गाडीमा परिवारलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर गाडी किन्दा परिवारको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मूल्यसँगै सुरक्षा प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ ।